आन्दोलन के का लागि ? | Birat Khabar
आन्दोलन के का लागि ?
एन्जु शिवाकोटी, विराटनगर । आन्दोलन के का लागि ? सामान्यतया हामिले बुझ्ने गरेको आम आन्दोलन न्यायिक प्रशासनहरुले अन्यायमा परेको कुरालाई ध्यानमा नदिदाखेरी सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि गर्ने गरेको देखिन्छ ।
तर हिजो सिराहाको गोलबजारमा सिके राउत नेक्रित्वको जनमत पार्टीले गरेको आन्दोलन हेर्दा न्यायको लागि गरिएको हो भन्न सकिने कुनै ठाउँ नै थिएन् । जनताको लागि सबै राजनैतिक दलहरुको मुख्य एजेण्डा नै अन्याय नगर्ने हुन्छ । तर न्यायको नाममा गरिने अन्यायलाई के भन्ने ?
हिजो सिराहाको गोलबजारमा भएको अनियन्त्रित जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले गरेको कर्तुतको सानो भागलाई एक व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा राखेको दृश्य साच्चै नै दर्दनाक थियो ।
टिकटकमा देखाइएको दृश्यमा ट्रक जलाइएको, ट्रक चालक गाडी छोडेड भागेको र अलि पर पूगेर अरु कसैको फोनबाट आफन्तलाई रुदै फोन गरेको देखिन्यो ।
ना ५ ख ५२२ नम्बरको उक्त ट्रक उदयपुरको गाइघाट जाँदै थियो । ट्रक चालकलाई ट्रकबाट गोलबजारको चोहर्वा चोकमा आन्दोलनकारीले लाठीभाटा सहित ढुँगा हान्दै रोक्न लगाएको थियो ।
आइतबारको उग्र प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्न १४ जनालाई पक्राउ गरिएको एसपी पाण्डेले बताए। उनका अनुुसार १४ वटा सवारीसाधनमा तोडफोड र एउटा ट्रकमा आगजनी भएको छ। प्रहरीका दुई र सशस्त्र प्रहरीका एक गरी तीनजना घाइते भएको पत्रपत्रिकामा उल्लेख छ ।
जनमत पार्टीले आइतबार सिरहामा आमहडताल घोषणा गरेको थियो। सिरहाको औरही गाउँपालिकाले किसानलाई वितरण गर्न खरिद गरेको गहुँको बीउ केही उच्छृंखल व्यक्तिको उक्साहटमा लुटिएको थियो। गाउँपालिकाले लुटपाटमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रशासनलाई गुहार्‍यो। प्रहरीले लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय मिथलेश यादवलाई पक्राउ गरी आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा चलायो।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी पिरोलिएका छन् किसानहरु । मलखाद, बीउविजन, सिँचाइको समस्या र भ्रष्टाचारले मधेस आक्रान्त छ । मधेसका यी मूल मुद्दा समातेर राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्नु कतिको जाहेज कुरा हो ? न्यायको नाममा यसरी दिनानुदिने हुने अन्यायको अन्त्य कहिल्य हुन्छ त ? राजनितिको खास्टो ओडेर गरिने अपराधको अन्त्य कहिल्यै नहुने हो त ?